Oriri Nsọ – 2azụ
Home / Church / The sacraments / Oriri Nsọ
Gịnị Mere Katọlik kweere na Timoti bụ Isi na Blood nke Jesus?
Azịza ya dị nkenke bụ na ndị Katọlik kweere na Timoti bụ Isi na Blood of Jesus n'ihi na ọ bụ Jizọs ziri, Onwe ya, na dere na Bible.
N'abalị Ọ raara ya nye, Ọ chikọta ya na ndịozi ya na-eme ememe Ngabiga, na ememe nri eri site na Israel (na eve nke ha ntọhapụ n'agbụ n'Ijipt).
Nri Ememe Ngabiga ahụ gụnyere anụ nke àjà nwa-aturu (ịhụ Exodus, 12:8). Nri Anyasị Ikpeazụ, nke mere na eve nke mmadụ ntọhapụ site na mmehie, bụ mmezu nke Ngabiga.
On n'abalị, a maara ugbu a dị ka Nsọ Thursday, Jesus, Nwa-aturu Chineke, nyere ya anụ ahụ na ọbara ga-eri ahụ kwesịrị ntụkwasị obi–sacramentally, n'ụdị achịcha na mmanya.1
Ndịàmà Jehova na ndị ọzọ na òtù dị iche iche na ọtụtụ jụrụ Catholic ozizi na Oriri Nsọ na ahịhịa ya mebiri Old Testament ukpan megide iri ọbara. Na Oziọma Mak 7:18-19, Otú ọ dị, Jesus wepụrụ ibu nke Mozis dietary mgbochi-nke gụnyere iri ọbara-Ya na-eso ụzọ. Mgbe Council nke Jerusalem, ndịozi na ọ machibidoro iri ọbara, ezie naanị akpan akpan ọnọdụ zere isi iwe ndị Juu (-ahụ mwube nke onyenchịkwa 15:29 na 21:25).
Inweta nri, agọzi ya, agbasa ya, na ikesa ya n'etiti Ndịozi, Jizọs kwuru, "Were, eri; nke a bụ ahụ m " (Matiu 26:26). O were a cup, nke O nwekwara gọzie, ma nyere ha, si, "Ṅụọ nke ya, unu nile; n'ihi na nke a bụ ọbara m nke ọgbụgba ndụ, nke a na-awụpụ n'ihi ọtụtụ mmadụ maka mgbaghara nke mmehie " (Matiu 26:27-28). Ọ bụ ezie na ọtụtụ mgbe, Jizọs kwuru atụ N'oge ozi ya, N'oge a dị mkpa O kwuru hoo haa,. "Nke a bụ ahụ m,"O wee sị, enweghị nkọwa. "Nke a bụ ọbara m." O siri ike iche n'echiche otú Jehova nwere ike ịbụ ihe kpọmkwem.
Jesus 'alụmdi nke Oriri Nsọ na Nri Anyasị Ikpeazụ emezu ya a ma ama Bread of Life ozizi, nke a na-e dere na nke isii isi nke Oziọma Jọn. Ozizi Elu Ugwu a na-Omalitere site multiplication achịcha na azụ, site nke puku mmadụ na-n'ụzọ ọrụ ebube nye si a obere ego nke nri (ahụ John 6:4 ọ bụ ezie na ọrụ ebube na-egosi na ihe niile Oziọma anọ). Ihe omume a bụ a Oriri Nsọ atụ, aa dị ka ọ na-eme n'oge ememme ngabiga na ọ na e mezuru site n'otu usoro Jesus ga-emecha jiri na Nri Anyasị Ikpeazụ-ewere achịcha, na-ekele, na ikesa ha (John 6:11). Mgbe ndị laghachi na ndị na-esonụ ụbọchị achọ ihe ịrịba ama si Ya, icheta otú ndị nna nna ha e nyere mana n'ala ịkpa (dị ka Exodus 16:14), Jesus anata, "N'ezie, n'ezie, M asị unu, ọ bụ Moses onye nyere unu achịcha ahụ si n'eluigwe; Nna m nyere unu ezi achịcha nke si n'eluigwe. N'ihi na achịcha nke Chineke bụ na nke si n'eluigwe bịa,, ma na-enye ndụ ka ụwa " (John 6:32-33).
"Onyenwe anyị, enye anyị achịcha a mgbe niile,"Ha na-eti (John 6:34).
"Abụ m achịcha nke ndụ,"Ọ na-eme; "Onye na-abịakwute m ga bụghị agụụ, na onye na-ekwere na m ga dịghị nku " (6:35). Ọ bụ ezie na okwu Ya mere ka ndị Juu erughị ala, Jesus aga n'ihu, Okwu ya na-eto eto iji nwayọọ nwayọọ na ihe graphic:
47 "N'ezie, n'ezie, M asị unu, onye na-ekwerekwa nwere ndụ ebighị ebi.
48 Abụ m achịcha nke ndụ.
49 Nna nna unu hà riri mana + n'ala ịkpa, na ha na-akpa.
50 Nke a bụ achịcha nke si n'eluigwe bịa,, na a nwoke wee rie ya ma ghara ịnwụ.
51 M achịcha ahụ dị ndụ nke si n'eluigwe bịa;; ma ọ bụrụ na onye ọ bụla n'ime erie achịcha a, ọ ga-adị ndụ ruo mgbe ebighị ebi; na nri nke m ga-enye maka ndụ nke ụwa bụ anụ ahụ m " (6:47-51; mesiri ike kwukwara).
amaokwu 51 nwere-apụghị ịgbagha agbagha na-egosi na Jizọs na-adịghị ekwu okwu n'ụzọ ihe atụ, n'ihi na Ọ na-egosipụta Bread nke a ga-eri ka otu anụ ọ ga-ata ahụhụ ma na-anwụ na Cross. Iji na-ekwu na na-ekwu banyere anụ ahụ ya n'akụkụ ihe odide a Ọ na-ekwu okwu n'ụzọ ihe atụ bụ na-ekwu na anụ ọ tara ahụhụ ma nwụọ na Cross bụ nanị ihe nnọchianya, n'ihi na ha bụ otu na otu!2
"Olee otú nwoke a na-enye anyị anụ ahụ ya ka na-eri?"Ndị mmadụ na-ajụ (6:52).
N'agbanyeghị na ha consternation, Jesus wee niile ọzọ na-ekwusi ike:
"N'ezie, n'ezie, M asị unu, bụrụ na unu erighị anụ ahụ Nwa nke mmadụ, ṅụọkwa ọbara ya, unu enweghị ndụ n'ime unu; Onye na-eri anụ ahụ m ma na-aṅụ ọbara m nwere ndụ ebighị ebi, m ga-emekwa ka o bilie n'ubọchi ikpe-azu. N'ihi na anụ ahụ m bụ nri n'ezie, ọbara m bụ ọṅụṅụ n'ezie. Onye na-eri anụ ahụ m ma na-aṅụ ọbara m nānọgide kwa n'ihu-m, na m na ya. Dị ka ndụ Nna zitere m, m na-ebi n'ihi Nna, ya mere, ọ na-eri m ga-adị ndụ n'ihi m. Nke a bụ achịcha nke si n'eluigwe bịa;, bụghị dị ka nna rie na nwụrụ; Onye na-eri achịcha a ga-adị ndụ ruo mgbe ebighị ebi " (6:53-58; mesiri ike kwukwara).
The eri Oriri Nsọ bụ Central ná ndụ nke Ndị Kraịst oge mbụ, onye "raara onwe ha ndịozi ahụ na nkuzi na mkpakọrịta, ka n'inyawa achicha na ekpere " (-Ahụ mwube nke onyenchịkwa 2:42). Rịba ama na "Ofufe nke inyawa achicha na ekpere" na-ezo aka efe ofufe adịghị.
Naanị afọ ole na ole mgbe ọnwụ nke ikpeazụ Apostle, Saint Ignatius nke Antiọk (d. dị ka. 107) kọwara efe ofufe adịghị otú ahụ, n'ịkatọ jụrụ okwukwe n'ihi ịghara "si Oriri Nsọ na ekpere" (Letter na Smyrnaeans 6:2). Na n'oge Church, Ọzọkwa, were Sunday, ụbọchị nke Mbilite n'Ọnwụ, dị ka ya Sabbath kwuru na mwube nke onyenchịkwa 20:7, nke na-ekwu, "N'ụbọchị mbụ nke izu, ... anyị zukọtara inyawa achicha ... " (CF. Didache 14; Justin na Martyr, First Apology 67).
Saint Paul achọpụta ma mana na nkume na gbụpụ ka mmiri ụmụ Izrel dị ka Oriri Nsọ metaphors. "All rikwara otu karịrị mmadụ nri na niile ṅụkwara otu karịrị mmadụ ọṅụṅụ,"Ọ na-ede. "N'ihi na ha na-aṅụ si ike karịrị ike mmadụ Rock nke soro ha, na Rock bụ Kraịst " (Lee akwụkwọ ozi ya mbụ na Corinthians10:3-4 nakwa dị ka Book of Revelations 2:17). Ọ na-aga na na-adụ ha ọdụ ndị Kọrịnt n'ihi na ha enweghị nsọpụrụ ke ndibọbọ Oriri Nsọ, ide:
11:23 N'ihi na m natara n'aka Onyenwe anyị ihe m nyefere gị, na Onyenwe anyị Jizọs n'abalị mgbe ọ na-arara ya nye ama achịcha
24 na mgbe o nyere ekele, ọ nyawara ya, na kwuru, Nke a bụ m ahu nke bụ maka gị. Ndi a na-echeta m.
25 N'otu ụzọ ahụ nwekwara iko, ke nri abalị, si, Iko a bụ ọgbụgba ndụ ọhụrụ ahụ na ọbara. -eme nke a, dị ka mgbe ị na-aṅụ ya, na-echeta m.
26 N'ihi na dị ka mgbe ị na-eri achịcha a ma na-aṅụ iko, ị na-akpọsa ọnwụ Onyenwe anyị ruo mgbe ọ bịara.
27 Onye ọ bụla, Ya mere, -ata achịcha ma na-aṅụ iko nke Onyenwe anyị na ihe na-erughị eru n'ụzọ ga-abụ onye ikpe mara nke na-emerụ ahụ na ọbara nke Onye-nwe.
28 Ka madu nwaputa onwe-ya, na eri achịcha na ịṅụ iko.
29 N'ihi na onye ọ bụla n'ime na-eri na ọṅụṅụ na-enweghị nghọta ahụ riri na ọṅụṅụ ikpé n'elu ya onwe ya.
30 Ọ bụ ya mere na ọtụtụ n'ime unu adịghị ike na ọrịa na, na ụfọdụ anwụwo (-ahụ Matthew 5:23-24, kwa).
kwa amaokwu 27, na-enweta na Timoti n'erughị eru bụ imehie megide Isi na Blood nke Jehova. Ya mere, ọ bụ uru na-arịọ: Olee otú ndị na-erughị eru n'ikuku nke achịcha nkịtị na wine ego ka a mmehie megide aru na obara nke Jesus? Pọl na-ekwu ọbụna na impious n'ikuku nke Oriri Nsọ bụ ihe mere "mere ọtụtụ n'ime unu adịghị ike na ọrịa na, na ụfọdụ anwụwo " (v. 30).
Ọ bụ naanị ihe kwesịrị ekwesị na ihe ndị kasị ama n'oge patristic (Church Nna) okwu na Real Presence si Saint Ignatius nke Antioch, onye mụtara Okwukwe nọ ọdụ ụkwụ nke ọkwọrọikọ John. N'ihe dị ka n'afọ A.D. 107, na iji Church si Oriri Nsọ ozizi iji chebe incarnation megide Docetists, gọnahụrụ Jizọs n'ezie bịara n'anụ ahụ,, Ignatius dere:
-Arịba ndị na-jide heterodox echiche na amara nke Jesus Christ bụ nke anyị, ma hụ otú megidere echiche ha na-na uche Chineke. ... Ha zere Oriri Nsọ na site n'ekpere, n'ihi na ha adịghị ekwupụta na Timoti bụ Anụ nke Onye Nzọpụta anyị Jizọs Kraịst, Anụ nke tara ahụhụ n'ihi mmehie anyị ma nke Nnam, Ya ịdị mma, akpọlite ​​ọzọ (Letter na Smyrnaeans 6:2; 7:1).
Otu Isi na tara ahụhụ ma nwụọ na Cross maka mmehie anyị na si na ndị nwụrụ anwụ, ka Ignatius kọwara, bụ ugbu anyị Holy Oriri Nsọ (ahụ John 6:51).
Saint Justin Martyr na, ede gburugburu 150, kwuru na Oriri Nsọ Bread na Wine na-natara, "ọ bụghị dị ka nkịtị achịcha ma ọ bụ nkịtị ọṅụṅụ,"N'ihi na ha bụ" anụ ahụ na ọbara nke na incarnated Jesus " (First Apology 66).
na banyere 185, Saint Irenaeus nke Lyons, onye nkụzi Saint Polycarp nke Smyrna (d. dị ka. 156) makwa John, okwu nke Oriri Nsọ gbachitere aru mbilite n'ọnwụ megide Nọstik. "Ọ bụrụ na ahụ na-azoputaghi,"Rụrụ ụka na Saint, "mgbe ahụ, n'ezie, abughi ka Jehova gbapụta anyị na ya Blood; dịghịkwa bụ cup of Oriri Nsọ ndị na-ekere òkè ya Blood ma ọ bụ Bread nke anyị na-agbaji-eketa òkè Ya Isi (1 Cor. 10:16)" (Against Heresies 5:2:2).
Origen kwuru nke Oriri Nsọ gburugburu n'etiti narị afọ nke atọ, "N'oge gara aga,, na ihe aghọta ụzọ, e manna nri; ugbu a, Otú ọ dị, ahụzu, e nwere Ezi Food, Anụ nke Okwu Chineke, dị ka ya onwe-ekwu: 'Anụ ahụ m bụ ezi nri, na ọbara m bụkwa ezi ihe ọṅụṅụ ' (John 6:56)" (Homilies on Numbers 7:2).
N'otu aka ahụ, Saint Cyprian nke Carthage (d. 258) dere:
Anyị na-ajụ na achịcha a na-nyere anyị kwa ụbọchị (CF. Matt. 6:11), nke mere na anyị bụ ndị na Kraịst ma na kwa ụbọchị na-enweta na Timoti dị ka nri nke nzọpụta, ghara, site ịdaba ụfọdụ ihe mwute mmehie na mgbe ezere na-ekwurịta okwu, ike jichie si eluigwe Bread, na-iche Kraịst Isi. ... Ya onwe-ya dọrọ aka ná ntị anyị, si, "Ọ bụrụ na unu erighị anụ ahụ Nwa nke mmadụ, ṅụọkwa ọbara ya, ị ga-enweghị ndụ na ị " (John 6:54) (Ekpere Onyenwe 18).
Ọbara nwa atụrụ Ememme Ngabiga na-iwesa. N'ezie, ọ machibidoro iwu n'ihi na Israel na-eri ọbara ọ bụla anụmanụ, dị ka ọbara na-anọchi anya ike ndụ nke anụmanụ, nke diri Chineke naanị (-ahụ Genesis, 9:4, na Levitikọs, 7:26). ọzọ, na Oriri Nsọ, Chineke chọrọ ịkọrọ ya Blood, Ya Life, na anyị na-ewulite anyị sacramentally. Na nke a ineffable Onyinye anyị na-aghọ otu anụ ahụ na ọbara, otu mmụọ, na Chineke (-ahụ Gospel of John 6:56-57 na Book of Revelations, 3:20). ↩
Jizọs jiri ihe atụ ke banyere onwe Ya n'ebe ndị ọzọ na Jọn Gospel, ịkpọ onwe ya "n'ọnụ ụzọ" na "vine," ọmụmaatụ (10:7 na 15:5, karị). Na ndị a ọzọ, ihe, Otú ọ dị, Ọ na-adịghị emetụta ihe fọrọ nke nta otu mesiri ike na Okwu ya na-na ọ na-eme na John 6, na nke Ọ akuko onwe Ya ọzọ na ọzọ na-amụba ihe doo anya. Ma ọ bụ ka ndị ọzọ a okwu ịkpali esemokwu dị n'etiti ndị na-ege ntị n'ụzọ Ya okwu John 6 ime. Ọzọkwa, na ọkwọrọikọ John n'ezie na-agwa anyị na Jizọs na-ekwu okwu n'ụzọ ihe atụ n'ime John 10:6, ihe ọ dịghị eme nke isii isi. ↩